ह्याकरहरुको ध्यान फेसबुकतिर, तपाईँ फस्नु त भएको छैन? – Saurahaonline.com
ह्याकरहरुको ध्यान फेसबुकतिर, तपाईँ फस्नु त भएको छैन?
काठमाडौं, पुस १३ । ‘म एकदमै समस्यामा परेको छु। मसँग मोबाइलमा व्यालेन्स छैन, तुरुन्तै पाँच सय रुपैयाँको रिचार्ज नम्बर पठाइदिनुहोला,’ रमेश कुँवरले यो म्यासेज आफ्नो म्यासेन्जरबाट करिव २ सय जना साथीभाइलाई पठाए।
महानगरीय अपराध महाशाखामा केही समय यता फेसबुक ह्याक भएको भन्दै उजुरी दिन आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। अहिले प्रत्यक दिन औशत १० जनाको उजुरी आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। महाशाखामा साइबर अपराध सम्बन्धि विषय हेर्ने प्रहरी निरीक्षक लीला डाँगी भन्छन्, ‘केही समयदेखि फेसबुक ह्याक र यस सम्बन्धित हुने अपराधहरु बढेका छन्।’
विभिन्न व्यक्तिको फेसबुक ह्याक गरेर अश्लिल फोटो पोस्ट गर्ने र रमाइलो लिनेहरुको सङ्ख्या बढी रहेको छ। यसरी ह्याक भएकामध्ये केहीले आर्थिक अपराध र बार्गेनिङ समेत गर्ने गरेको निरीक्षक डाँगी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘धेरै जसोले कसरी ह्याक हुन्छ भनेर उत्सुक भएर पनि गर्ने गरेको पाइयो।’ यसरी अहिलेसम्म प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका केही व्यक्ति आइटी पढ्दै गरेको भेटिएका छन्।
प्रविधिको विकाससँगै फेसबुक ह्याक गर्ने प्रविधि पनि सहज बन्दै गएको छ। फेसबुक म्यासेन्जरमा लिंक पठाएर सबैभन्दा बढी ह्याक गरेको पाइएको छ। भिडियो र तस्बिरको लिंक पठाई त्यसमा क्लिक गरे ह्याकरलाई ह्याक गर्न सजिलो हुन्छ। निरीक्षक डाँगी भन्छन्, ‘नेपालमा भिडियो र फोटोको लिंक प्रयोग गरी सबैभन्दा बढी ह्याक गरेको देखिन्छ।’